CARES ऐन – COVID-19 कोरोना भाइरस आर्थिक प्रभाव भुक्तानीहरू/प्रोत्साहन जाँचहरू | VTLawHelp.org
अप्रिल 16, 2020 मा अद्यावधिक गरिएको
संघीय कोरोना भाइरस राहत कानून (CARES ऐने भनिने) ले संयुक्त राज्यका अधिकांश वयस्कहरूलाई पैसा दिनेछ। IRS ले तपाईंको घरमा पैसा पठाउनेछ वा त्यसलाई तपाईंको खातामा जम्मा गर्नेछ। कर फिर्ता दायर नगरेका केही मानिसहरूलाई पैसा प्राप्त गर्न कर फाराम भर्न आवश्यक पर्दैन। IRS ले संघीय आर्थिक प्रभाव भुक्तानी (EIP) को विद्युतिय निक्षेप लगभग अप्रिल 13, 2020 देखि सुरु हुनेछ।
घोटालाहरू बारे सावधान रहनुहोस्!
हामी आइरहेको प्रोत्साहन भुक्तानीका साथ घोटाला र छल हुने सम्भावना बारे चिन्तित छौं। ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी वा बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराउनुहोस् जसले उनीहरूले यो पैसामा अग्रिम प्राप्त गर्न सक्छन् भनी भन्दछन्। छिटो पैसा प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि आवेदन नभर्नुहोस्। प्रणालीले त्यो तरिकाले काम गर्दैन।
IRS ले आर्थिक प्रभाव भुक्तानीका सम्बन्धमा भए तापनि — तपाईंको व्यक्तिगत वा बैङ्क खाता सम्बन्धी जानकारी बारे सोध्दैँ सामाजिक मिडियामा तपाईंलाई फोन गर्नेछैन, तपाईंलाई सन्देश पठाउनेछैन, तपाईंलाई इमेल गर्नेछैन वा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछैन। साथै, आर्थिक प्रभाव भुक्तानी वा फिर्ताका बारेमा विशेष जानकारी छ भनी दाबी गर्दैँ संलग्नक वा लिङ्कहरूका साथ इमेलहरूमा सचेत हुनुहोस्। इमेलहरू नखोल्नुहोस् र संलग्नता वा लिङ्कहरूमा क्लिक नगर्नुहोस्। घोटालाहरूको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न IRS.gov मा जानुहोस्।
तपाईंले 2018 वा 2019 कर फिर्ता दायर गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले कसरी यी कर वर्षको अवधिमा आफ्नो फिर्ता दायर गर्नुभयो भन्ने कुरामा आधारित भई तपाईंले प्रत्यक्ष निक्षेप वा चेकद्वारा स्वचालित रूपमा आफ्नो EIP प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं केही गर्नुपर्दैन।
तपाईंले 2018 वा 2019 कर फिर्ता दायर गर्नुहुन्न तर तपाईंले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा अशक्तता (SSDI) वा रेलरोड अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ भने, तपाईंले जनवरी वा फेब्रुअरीमा SSA-1099 वा RRB-1099 भनिने कर फाराम प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो अवस्थामा, तपाईंले स्वचालित रूपमा आफ्नो प्रोत्साहन जाँच प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं केही गर्नुपर्दैन। तपाईं अतिरिक्त सुरक्षा आय (SSI) प्राप्तकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईंले स्वचालित रूपमा प्रोत्साहन जाँच प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं केही गर्नुपर्दैन। (तपाईंले भर्खरै 2020 मा सामाजिक सुरक्षा वा SSI प्राप्त गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तलको नोट हेर्नुहोस्।)
तपाईंलाई कर फिर्ता दायर गर्न आवश्यक पर्दैँन भने, जस्तै, $12,200 भन्दा कम आम्दानी भएका न्यून-आय परिवारहरू (विवाहित जोडीहरूका लागि $24,400) वा तपाईंको एकमात्र आम्दानीको स्रोत पुगेको (TANF), सामान्य सहायक वा भेटेरनका लाभहरू, IRS ले तपाईंका जानकारी उपलब्ध गराउन तपाईंका लागि एक अनलाइन पोर्टल सिर्जना गरेको छ। तपाईंको प्रोत्साहन जाँच प्राप्त गर्न अनलाइन फाराम भर्नुहोस्। तपाईंलाई फारामको लागि आवश्यक पर्ने जानकारी:
पूरा नाम, हालको पत्राचार ठेगाना र इमेल ठेगाना
जन्ममिति र मान्य सामाजिक सुरक्षा नम्बर
तपाईंसँग बैङ्क खाता छ भने, बैङ्क खाता नम्बर, खाताको प्रकार र राउटिङ नम्बर
तपाईंको यो वर्षको सुरूमा IRS बाट एउटा प्राप्त गर्नुहुन्छ भने सुरक्षित व्यक्तिगत पहिचान नम्बर (IP PIN) पहिचान गर्नुहोस्।
तपाईंसँग एउटा भएमा ड्राइभर इजाजतपत्र वा राज्यद्वारा जारी गरिएको आइडी
तपाईंसँग बस्ने र तपाईंमा निर्भर रहने 17 वर्षभन्दा कम उमेरको प्रत्येक योग्य बच्चाको लागि: नाम, सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा अंगीकरण करदाताको पहिचान नम्बर र तपाईं वा तपाईंको जीवनसाथीसँगको उनीहरूको सम्बन्ध
तपाईंले भर्खरै 2020 मा सामाजिक सुरक्षा वा SSI लाभहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्नुभएको छ र तपाईंले 2018 वा 2019 को कर फिर्ता दायर गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले आफ्नो प्रोत्साहन जाँच प्राप्त गर्न यो समान फारामको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, SSA -1099 वा RRB-1099 प्राप्तकर्ता (जो, सामाजिक सुरक्षा अवकाश, SSDI वा रेलमार्ग सम्बन्धी अवकाश लाभार्थी हुनुहुन्छ) वा SSI प्राप्तकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईं घरमा बस्ने 17 वर्ष मुनिको योग्यता प्राप्त बालबालिका हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रति बच्चा $500 भुक्तानीको दाबी गर्न यो समान अनलाइन फारामको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई कर फिर्ता दायर गर्न आवश्यक परेमा (विवाहित जोडीहरूका लागि तपाईंको आय $12,200 वा $24,400 भन्दा माथि थियो), कर फिर्ताको तयारी गर्न र पेश गर्नका लागि IRS नि:शुल्क कर फाइल वा टर्बो कर जस्ता नि:शुल्क कर तयारी सेवा प्रयोग गर्नुहोस्। वा तपाईंले यो निर्देशिका मार्फत कागजी आय कर फिर्ता दायर गर्न वा पेशागत कर विवरण तयारीकर्ता फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
सम्झनुहोस्, तपाईंसँग कर फिर्ता दायर गर्न जुलाइ 15, 2020 सम्मको समय छ। EIP भुक्तानीहरू डिसेम्बर 2020 सम्ममा जारी गरिएको हुनेछ।
हामीले नयाँ जानकारी आउँछ भन्ने रूपमा हाम्रो वेब पृष्ठ vtlawhelp.org मा अद्यावधिक गर्नेछौं।
थप जानकारीका लागि IRS.gov/coronavirus जाँच गर्नुहोस्।
प्रश्न तथा जवाफहरू
मलाई छल र घोटालाहरूको बारेमा के थाहा हुनुपर्छ?
हामी छल र मानिसहरूले तपाईंमाथि रिपिङ गर्ने सम्भावना बारे चिन्तित छौं। तपाईंलाई यो पैसा द्रुत रूपमा प्राप्त गर्नमा कसैले पनि मद्दत गर्दैनन्। कसैलाई पनि आफ्नो बैङ्क खाता सम्बन्धी जानकारी नदिनुहोस् जसले तपाईंलाई तिनीहरूले तपाईंको पैसा प्राप्त गर्नमा तपाईंलाई मद्दत गर्छन् भनी भन्दछन्। तिनीहरूले गर्दैनन्। तिनीहरूले तपाईंबाट चोरी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। घोटालाहरूको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न IRS.gov मा जानुहोस्।
तपाईंले कति पैसा प्राप्त गर्नुहुनेछ?
समायोजित कुल आम्दानी प्रति वर्ष $75,000 भन्दा कम भएका वयस्कहरू वा समायोजित कुल आम्दानी $150,000 भन्दा कम भएको सँगै फाइल गर्ने जोडिहरूले प्रत्येक वयस्कलाई $1,200 दिनुहुनेछ, साथै तपाईंसँग बस्ने र तपाईंमा निर्भर रहने 17 वर्षभन्दा मुनिका प्रत्येक बच्चालाई $500 दिनुहुनेछ।
उच्च आम्दानी भएका मानिसहरूको लागि, प्रोत्साहन जाँचको रकम घट्छ। तपाईंले $99,000 भन्दा धेरै आम्दानी गर्नुहुन्छ वा जोडिहरूले $198,000 भन्दा बढी आम्दानी गर्छन् भने उनीहरूले कुनै पनि प्रोत्साहन जाँच प्राप्त गर्नेछैन।
स्वचालित रूपमा प्रोत्साहन जाँच कसले प्राप्त गर्छ?
2018 वा 2019 कर दायर गर्ने मान्य सामाजिक सुरक्षा नम्बर भएको सबै व्यक्ति
सामाजिक सुरक्षा, पूरक सुरक्षा आम्दानी (SSI), सामाजिक सुरक्षा अक्षमता बीमा (SSDI) वा रेलरोड अवकाश प्राप्त गर्ने सबै व्यक्ति। (तर तपाईंले भर्खरै 2020 मा सामाजिक सुरक्षा वा SSI प्राप्त गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिइएको नोट हेर्नुहोस्।)
पैसा प्राप्त गर्नको लागि IRS को थप जानकारी कसले दिनुपर्छ?
2018 वा 2019 मा कर फिर्ता दायर नगर्ने र कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा अवकाश वा SSI वा SSDI वा रेलरोड अवकाश प्राप्त नगर्ने सबै व्यक्ति।
सामाजिक सुरक्षा वा SSI वा SSDI प्राप्त गर्ने र तपाईंसँग बस्ने र तपाईंमा निर्भर रहने 17 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा नातिनातिना भएका कोही व्यक्ति। तपाईंले सबैजनालाई $500 दिनको लागि कर फाराम दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।
2020 मा सामाजिक सुरक्षा वा SSI लाभहरू प्राप्त गर्न भर्खर सुरु गरेको र 2018 वा 2019 को लागि कर फिर्ता दायर नगरेको व्यक्ति।
यो IRS अनलाइन फाराम भर्नुहोस्।
तपाईंसँग इन्टरनेटमा पहुँच नभएमा, तपाईंले कागजी कर फिर्ता दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रक्रिया गर्न IRS लाई धेरै समय लाग्नेछ।
प्रोत्साहन पैसा प्राप्त गर्नको लागि कसले कर फिर्ता दायर गर्नुपर्छ?
तपाईंले कर फिर्ता दायर गर्न आवश्यक नपरेमा (विवाहित जोडीहरूका लागि तपाईंको कुल आय $12,200 वा $24,400 भन्दा माथि थियो), तपाईंले कर फिर्ताको तयारी गर्न र पेश गर्नका लागि IRS नि:शुल्क कर फाइल वा टर्बो कर जस्ता नि:शुल्क कर तयारी सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले यो निर्देशिका मार्फत कागजी आय कर फिर्ता दायर गर्न वा पेशागत कर विवरण तयारीकर्ता फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
कर फिर्ता फाइलिङको समाप्त मिति कहिले हो?
2019 कर फाइलिङको समाप्त मिति अहिलेको जुलाई 15, 2020 मा हो।
$69,000 वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारहरूले IRS FreeFile अनलाइन प्रयोग गर्न सक्छन्।
तपाईंले प्रोत्साहन जाँचको लागि जुलाई 15 कर फाइलिङको समाप्त मिति छुटाउनुभएमा, तपाईंले 2020 कर फिर्ता दायर गर्दा कर क्रेडिटको रूपमा पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूले दायर गरेमा कसले जाँच प्राप्त गर्दैन?
अन्य कर फाइलरहरूका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको रूपमा दावी गर्न सकिने मानिसहरू। यसमा धेरैजसो कलेजका विद्यार्थीहरू समावेश हुन्छन्।
मान्य सामाजिक सुरक्षा नम्बर नभएको अप्रवासीहरू।
तपाईंको कर फारामहरूमा सूचीबद्ध गरिएका कुनै पनि व्यक्तिसँग मान्य सामाजिक सुरक्षा नम्बर नभएमा, तपाईंले चेक प्राप्त गर्नुहुँदैन।
म पैसा कहिले प्राप्त गर्नेछु?
IRS ले योजना ढिलो-अप्रिलसम्ममा पैसा पठाएर सुरु गर्ने योजना छ भनी भन्दछ तर यसलाई धेरै हप्ता लाग्न सक्छ।
IRS ले पैसा कहाँ पठाउनेछ?
यदि कर फिर्ती रकम वा सामाजिक सुरक्षा लाभहरू तपाईंको बैङ्कमा प्रत्यक्ष रूपमा जम्मा हुन्छन्, IRS ले समान बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्नेछ। अन्यथा, IRS ले तपाईंको सबैभन्दा हालैको कर फाराम र तपाईंको सामाजिक सुरक्षा लाभ कथनमा सूचीबद्ध गरिएका ठेगानामा मेल गर्नेछ।
तपाईं हालसालै सर्नुभएको छ भने, निम्न कार्य गरेर आफ्नो ठेगाना अद्यावधिक गर्नुहोस्:
तपाईंसँग पहिले नै छैन भने आफ्नो 2019 को कर फिर्ता फाइल गर्नुहोस्, वा
ठेगाना फाराम (IRS फाराम 8822) परिवर्तन फाइल गर्नुहोस्। यो IRS लाई तपाईंको ठेगाना परिवर्तको प्रक्रिया गर्न चारदेखि छ हप्ता लाग्न सक्छ, वा
ठेगाना पवर्तनका साथ एक्लै एक स्वचालित विस्तार (IRS फाराम 4868) फाइल गर्नुहोस्।
के मेरो प्रोत्साहन जाँच ऋणका कारण मबाट लिन सकिन्छ?
तपाईंको प्रोत्साहन जाँच एक विस्तारका साथ संघीय वा राज्य निकाय अफसेटको विषय हुने छैन। (यदि तपाईं आफ्नो बच्चाको समर्थन वा तपाईंको प्रोत्साहन जाँच बाल सहायता ऋणका लागि लिइएका हो भनी सोच्नुहुन्छ भने, थप कुराहरू फेला पार्न आफ्नो राज्यको बाल सहायता कार्यालयमा फोन गर्नुहोस्।)
यद्यपि, कङ्ग्रेसले ऋण सङ्कलन उपलब्ध गराउन यो छूटलाई विस्तार गरेन। यदि तपाईंले उनीहरूले '' विश्वासको प्रक्रिया'' मार्फत तपाईंको प्रोत्साहन जाँच गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भनी क्रेडिटर वा आफ्नो बैंकबाट सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई प्रतिनिधित्व गर्न र उनीहरू तपाईंको प्रोत्साहन लिन सक्षम छैनन् भनी विवाद गर्न सक्षम हुन सक्छौं। तपाईंको बैंक तपाईं आफैले गर्न सक्ने ओभरड्राफ्ट परिवर्तन र बैङ्क शुल्कहरू भुक्तान गर्न तपाईंको प्रोत्साहन जाँच लागू गर्न पनि सक्षम हुन सक्छ। तपाईंको आफ्नो कुनै पनि शुल्कहरू हेर्न र तिनीहरूले त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नेछन् भनी सोध्न आफ्नो बैंकमा फोन गर्नुहोस्।
के प्रोत्साहन जाँचले मेरा लाभहरूलाई प्रभाव पर्नेछ?
प्रोत्साहन पैसा ''आम्दानी'' को रूपमा गणना गरिने छैन र तपाईं SSI, पहुँच, सहायता प्रदान गरिएको हाउजिङ, औषधि वा 3SquaresVT (खाद्य स्ट्याम्पहरू) कम गरिने छैन। पैसा पनि ''स्रोत'' को रूपमा गणना हुँदैन, जबसम्म तपाईं यसलाई एक वर्ष भित्र खर्च गर्नुहुन्छ।
मैले यो मेरो 2020 कर रिफण्डमा "अग्रिम" छ भन्ने सुनेको थिएँ। मेरो 2020 को आम्दानी गत वर्षभन्दा बढी भएमा मैले पैसा फेरि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ?
होइन, IRS तपाईंको 2019 वा 2018 फारामहरूको जानकारीमा निर्भर रहिरहेको छ। तपाईंले सोचेको भन्दा बढी अग्रिम जाँच प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि जरिवाना छैन। तपाईंको वास्तविक 2020 आय र आश्रितहरूको संख्याको अर्थ तपाईंले थप पैसा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भएमा, IRS ले तपाईंलाई 2021 मा थप रकम भुक्तानी गर्नेछ।
मसँग मेरो अवस्था बारे थप प्रश्नहरू छन्। मैले मद्दत कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
भरमन्ट वासीहरूले हाम्रो फाराम भरेर वा 1-800-889-2047 मा फोन गरेर भरमन्ट न्यून-आय करदाता क्लिनिक (LITC) मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्छन्।